PUBG Mobile - Androidsis | Androidsis (Bogga 2)
Sida loo furo sanduuqyada ku jira PUBG Mobile si aad u hesho abaalmarinno dammaanad leh oo aadan u dhiman isku dayga
Baro sida loo furo sanduuqyada Premium iyo Providence ee PUBG Mobile si aad u hesho abaalmarin la hubo (hargaha, boorsooyinka dhabarka lagu qaato, kaabayaasha iyo waxyaabo kale oo badan).
Casharro wax ku ool ah oo fudud oo aan ku sharxeyno sida loo sameeyo boodboodka shabeelka caanka ah ee PUBG Mobile, waa xeelad ay tahay inaad ogaato!
Casharro aan ku sharaxeyno sida loo kala bixiyo hubka loona sameeyo koofiyadda, boorsada iyo gaariga inaysan ka muuqan hoolka PUBG Mobile.
Sida loo soo Dejiyo oo loo rakibo PUBG Mobile 1.0 Global Version OBB Xidhmada
PUBG Mobile waxay heshay cusbooneysiin 1.0 oo kudareysa waxyaabo badan oo horumar, isbedel iyo warar ah. Halkan ka degso xirmada ciyaarta OBB.
PUBG Corp. wuxuu joojiyay xiriirkii uu la lahaa Tencent Games ee PUBG si uu ugu laabto Hindiya
Sidan oo kale waxay dooneysaa in laga qaado xayiraadda hadda saaran PUBG Mobile ee Hindiya, oo ah dal leh saldhig 30 milyan ciyaartoy ah.
Kuwani waa dhammaan wararka iyo isbeddelada cusbooneysiinta 1.0 ee PUBG Mobile: Erangel 2.0 iyo nabad gelyo haakariska!
Cusboonaysiinta moobiilka ee PUBG 1.0 waxay la timid tan isbeddello iyo horumar ah. Waxaan kuu sheegeynaa wax kasta oo ay ka mid tahay.
Hindiya ayaa xannibtay PUBG Mobile iyo 177 barnaamijyo kale oo Shiine ah
Hindiya ayaa xannibtay marinka PUBG Mobile iyo 116 barnaamij oo kale oo aan laga isticmaali karin dalalkan fog.
PUBG Mobile waxaa 100% loo cusbooneysiiyay "Xilliga Cusub" ee nooca 1.0 ee imaan doona Sebtember 8
Teknolojiyadaha garaafyada cusub, ololeeye cusub iyo qarsoodi ah in lagu xalliyo kahor Sebtember 8 ee PUBG Mobile.
Sida looga hortago kuwa kale inay ku basaasaan oo aad natiijooyinkaaga ku aragto PUBG Mobile
Waxaa jira muuqaalo xiiso leh meel kasta, xitaa PUBG Mobile. Waxaa laga yaabaa inaad neceb tahay kuwan oo aad rabto inaad iska ilaaliso, waana taas sababta aan kuu tusno sida.
Hindiya ayaa ka fiirsaneysa inay mamnuucdo PUBG Mobile si ay u sii wado dagaalka ay kula jirto Shiinaha
Dowladda India ayaa darsaya suurtagalnimada in 300 oo codsi kale laga saaro Play Store, dhammaantoodna ka soo jeeda Shiinaha.
Maxay yihiin hubka 'XT' cusub maxaase horumar ah oo ay ku keenaan PUBG Mobile?
PUBG Mobile, ayaa cusbooneysiinti ugu dambeysay, oo ah 0.19.0, waxay sii deysay hubka XT. Waxaan kuu sheegeynaa waxa ay yihiin iyo horumarka ay soo bandhigaan.
Casharro wax ku ool ah oo fudud oo aan ku sharxeyno sida looga helo hub bilaash ah, dhar iyo maqaarro gaari oo PUBG Mobile ah.
Kuwani waa dhammaan wararka iyo hagaajinta ee cusbooneysiinta 0.19.0 ee PUBG Mobile ay keento: khariidad cusub oo gaar ah ayaa lagu daray
PUBG Mobile waxay sii deyn doontaa nooc cusub oo ka mid ah ciyaarta oo ku socota dhisme lambar 0.19.0 waxayna keentaa waxyaabo badan oo cusub, iyo sidoo kale khariidadda cusub ee Livik.
Kani waa khariidada cusub ee Livik oo u gaar ah PUBG Mobile 15-daqiiqo oo ciyaaro ah
Khariidad leh hawo Nordic ah oo la yiraahdo Livik isla markaana dhowaan imaan doonta PUBG Mobile oo loogu talagalay kuwa aan haysan wax ka badan 15 daqiiqo ciyaaraha.
Waa maxay qaabeynta qaababka ugufiican ee PUBG Mobile iyo ciyaaro kale?
Ma rabtaa inaad noqoto ciyaaryahan ka fiican PUBG Moble? Hagaag, codso qaababkan qaabeynta si aad natiijo fiican uga hesho cayaaraha.
5 tilmaamood oo wanaagsan si aad u noqotid ciyaarista PUBG Mobile gamer
Waxaan soo bandhigeynaa isku soo uruurinta shan talooyin iyo tabaha kaa caawin doona inaad noqoto ciyaaryahan ka fiican PUBG Mobile, dagaalka caanka ah ee Tencent ee royale.
Casharro aan si fudud oo dhakhso leh ugu sharraxno sida loo hagaajiyo xakameynta hubka ee PUBG Mobile iyadoo la adeegsanayo wareegga.
Kani waa khariidada cusub ee Karakin ee dhowaan imaan doonta PUBG Mobile
Khariidad 2x2 taasina waxay noqoneysaa tan ugu yar dhammaan maalinta la sii daayo PUBG Mobile. Gudaha PUBG waad ku raaxeysan kartaa laga bilaabo Janaayo 22.